ढुंगेसाँघुको क्योकुशिन कान कराँते सकियो | eAdarsha.com
ढुंगेसाँघुको क्योकुशिन कान कराँते सकियो
पोखरा । पोखराको ढुंगेसाँघुमा माघे मेलासँगै १९ औं माछापुच्छ«े गण्डकी प्रदेशस्तरीय फुल कन्ट्याक्ट तथा प्रथम नेपाल क्योकुशिन कान प्रतियोगिता सकिएको छ ।
नेपाल क्योकुशिन कान कराँते संघ कास्की शाखाको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ २५ तौल समुहमा शालिन केसी प्रथम, सत्कार प्रतेल दोस्रो, प्रमेश मगर र नसिब थापामगर तेस्रो बने ।
३० केजी तौल समुहमा रोहन आचार्य पहिलो, अविषेक तामाङ दोस्रो, सोबिन प्रतेल र प्रनिल श्रेष्ठ तेस्रो भएका छन् । ३५ केजी तौल समूहमा रोशन गुरुङ पहिलो, रमाकान्त मगर दोस्रो, विधान घिमिरे र निशेष थापामगर तेस्रो भएका छन् ।
त्यस्तै, ४० केजी तौल समुहमा राजन पोख्रेल पहिलो, सुदीप तिमिल्सिना दोस्रो, आदित्य मल्ल र निराजन खत्री तेस्रो भएका छन् । ४५ केजी तौल समुहमा राजेश गौतम पहिलो, राजन बि.क. दोस्रो, मिराज परियार र सितल कुमाल तेस्रो भएका छन् ।
पुरुषतर्फकै ५० केजी तौल समूहमा युवराज गुरुङ पहिलो सुमित सिग्देल दोस्रो, सम्राट सेन र संगम श्रेष्ठ तेस्रो भएका छन् । ५५ तौल समूहमा सुमन बराम पहिलो, दीपेश गुरुङ दोस्रो, अंकित गुरुङ र ह्ुमन मस्र्याङदी तेस्रो भएका छन् । खुला तौल समुहमा गोविन्द रोका पहिलो, संगम गुरुङ दोस्रो, गणेश अधिकारी र नबराज गुरुङ तेस्रो भएका छन् ।
महिलातर्फको ४० केजी तौल समुहमा मातृका शाही पहिलो, ज्याक्सिना क्षत्री दोस्रो, ललिता छन्त्याल र अंशु कार्की तेस्रो भएका छन् । ४५ केजी तौल समुहमा मनिषा तामाङ पहिलो, सर्वदा पौडेल दोस्रो, सिम्रन खत्री र पुष्पा बिसी तेस्रो भएका छन् ।
त्यस्तै, ५० केजी तौल समूहमा सरगम कुमाल पहिलो, सदिक्षा कुमाल दोस्रो, सिता बि.क. र ममता पौडेल तेस्रो भएका छन् । खुला तौल समुहमा युनिका शेरचन पहिलो, रचना मगर दोस्रो, सृजना पुन र रुवी क्षत्री तेस्रो भएका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा, नेपाल क्योकुशिन कान कराँते संघ केन्द्रीय अध्यक्ष बिनय मल्ल, प्रशिक्षक राजेन्द्र सुवेदी, संघ कास्कीका अध्यक्ष बेलबहादुर थापा, संघ गण्डकी प्रदेश प्रमुख दीपकबहादुर गोदार, प्रतियोगिता संयोजक दानबहादुर क्षत्री लगायतले विजयी खेलाडीलाई शिल्ड मेडल प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
पोखरा रंगशालामा पुस २९ गते र ढुंगेसाँघुमा माघ १ गते भएको प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका १ सय ५० भन्दा बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।